Dilal ka dhacay Magaalooyinka, Gaalkacyo,Afgooye & Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dilal ka dhacay Magaalooyinka, Gaalkacyo,Afgooye & Muqdisho
By Ardaan Yare	 On Nov 19, 2019
Rag ku hubeysnaa sida la sheegay bustoolado ayaa xalay Xaafada Daaf Eyle ee degmada Afgooye,waxaa ay ku dileen Nin lagu Magacaabi jiray Cali Maxamed Dhuun,iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in Ninka la dilay uu kamid ahaa Ergadii soo dooratay Xildbibaannada Koonfur Galbeed ee waqtigooda uu dhamaaday.
Dhinaca kale Rag hubeysan ayaa Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo waxaa ay ku dileen taliyihii nabadsugida iyo sirdoonka gobolka Mudug ee Maamulka Puntland.
Taliyaha la dilay oo lagu Magacaabi jiray Korneyl Xaashi Aaden Cilmi ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa Xaafad lagu Magacaabo Suuq Barwaaqo oo ku taalla Waqooyiga Gaalkacyo,iyaga oo goobta ka baxsaday.
Ciidamada Ammanaka Puntland oo gaaray goobta dilka uu ka dhacay ayaa la sheegay inay sameeyeen howlgallo baaritaano ah in kastoo aan wax dad ah lagu qaban.
Sidoo kale rag la sheegay inay ahaayeen Burcad ayaa Xaafada Jamuuriya ee degmada Kaaraan waxaa ay ku dileen wiil dhalinyaro ahaa xilli ay ka dhacayeen taleefoonka Gacanta oo uu watay.
Wararaka ayaa waxaa ay sheegayaan in dilka kahor Kooxda burcada ah iyo wiilka dhalinyarada ah ay wada murmeen taas oo keentay inay dilaan.